09/09/2021 - Page2of3- ALANZAYAR
ရုပ်ကလေးကလည်းချော စာကလည်းတော်နေ၍ မိန်းကလေးတွေဖက်ကနေ ရည်းစားစ စကားလာပြောခြင်းကို ခံနေရသော ကောင်လေး
ရုပ်ကလေးကလည်းချော စာကလည်းတော်နေ၍ မိန်းကလေးတွေဖက်ကနေ ရည်းစားစ စကားလာပြောခြင်းကို ခံနေရသော ကောင်လေး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Da Nangတွင် နေထိုင်သော Trong Datအမည်ရှိ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် ကောင်လေးသည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁မီတာ၇၅စင်တီမီတာမြင့်မားသည့် အရပ်အမောင်းရှိပြီး စမတ်ကျသော ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေးများကြား အတော်လေးရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ ကောင်လေးသည် သူဧ။်အနာဂတ်တွင် […]
(၂၃)ပေရှိ စပါးအုံးမြွေကြီးနဲ့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကျဲခဲ့ရတဲ့ ခြံစောင့်ဝန်ထမ်း
(၂၃)ပေရှိ စပါးအုံးမြွေကြီးနဲ့ သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကျဲခဲ့ရတဲ့ ခြံစောင့်ဝန်ထမ်း အသက် 37 နှစ်အရွယ် ခြံစောင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Robert Nababan ဟာ Riau စီရင်စု၊ Indragiri Hulu Regency နယ်မှာ အလုပ်ကနေ အိမ်ကို ပြန်လာစဉ် အရှည် 23 ပေ ရှိတဲ့ […]
အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ပွဲစဉ်ကိုဒီဇင်ဘာလမှသာမြင်တွေရဖွယ်ရှိနေပါတယ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကစတင်လာခဲ့တဲ့One Championship ဟာဒီနှစ်ဆို၁၀နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်OneChampionshioဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ၁၀နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ် ထားကြောင်းပြော​ကြားထားပါတယ် အောင်လကိုစက်တင်ဘာလပွဲစဉ်မှာပါဝင်လာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပင်မဲ့ပါဝင်လာချင်းမရှိတာကြောင့်Oneဥက္ကဋ္ဌစီစဉ်မဲ့ ဒီဇင်ဘာလထဲကပြိုင်ပွဲကြီးမှာပါဝင်နိုင်ခြေများ​နေပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ပွဲစဉ်ကို ဒီဇင်ဘာလမှာမြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်လာခဲ့တဲ့ One Championship ဟာဒီနှစ်ဆို ၁၀ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ One Championship ဥက္ကဌကတော့ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ […]
ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် လူအယောက် ၃၀ ရှာပေးရန် စစ်ကောင်စီညွှန်ကြား
ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် လူအယောက် ၃၀ ရှာပေးရန် စစ်ကောင်စီညွှန်ကြား မကြာခင် ပေါ်တာဆွဲတော့မယ် ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် လူအယောက် ၃၀ ရှာပေးရန် စစ်ကောင်စီညွှန်ကြား ဒန်နီ ရန်ကုန်တိုင်း ၊မှော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများအားလုံးကို တစ်ရွာလျှင် လူအယောက် ၃၀ ရှာပေးရန် စစ်ကောင်စီက ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံ ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ […]
စာရင်းရှင်းစရာ ကျန်နေသေးတဲ့ သူကို အားမနာတော့ဘူး ဒဲ့ရှင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ ထူးအယ်လင်း
စာရင်းရှင်းစရာ ကျန်နေသေးတဲ့ သူကို အားမနာတော့ဘူး ဒဲ့ရှင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ ထူးအယ်လင်း အနုပညာ ဂီတေလာကမှာ ထူးခြားတဲ့ အသံကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းကသီချင်းကောင်း များစွာကို သီဆိုလာခဲ့တာဆိုရင် ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်ကြာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်လှမ်း လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးအယ်လင်းကတော့ အနုပညာ အလုပ်မှာတင် အောင်မြင်ရုံမကပဲ ပရဟိတအလုပ်တွေကို […]
ညနေ (၆) နာရီ နောက်ဆုံးရသတင်းထူးများ….
ညနေ (၆) နာရီ နောက်ဆုံးရသတင်းထူးများ…. ယနေ့ညနေပိုင်းက ရေစကြိုတွင် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းမိုင်းခွဲခံရ ရန်ကုန်တွင်လည်း ဗုံးများပေါက်ကွဲပြီး ပစ်ခတ်သံများ အဆက်မပြတ်ကြားနေရ ဖယ်ခုံတိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၅ ဦးသေဆုံး သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို ကုလသမဂ္ဂအဖြစ်တင်သွင်းမှုကန့်ကွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် မဟာမိတ် ၂၃ ဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းအရာ အစရှိတဲ့သတင်းများကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို အောက်ကရုပ်သံဖိုင်တွင် […]
ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့် အမေနဲ့အစ်မဖြစ်သူကျန်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကို မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ ဗီဒီယိုကို စိတ်မကောင်းစွာပြသလာတဲ့ PDF လူငယ်လေး(ဗွီဒီယိုဖိုင်)
ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့် အမေနဲ့အစ်မဖြစ်သူကျန်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကို မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ ဗီဒီယိုကို စိတ်မကောင်းစွာပြသလာတဲ့ PDF လူငယ်လေး(ဗွီဒီယိုဖိုင်) တော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံကြီးမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေပြီး ပြည်သူတွေအတွက် အနစ်နာခံနေကြရတဲ့ သူရဲကောင်းရဲဘော်တွေမှာ ပေးဆပ်မှုတွေတော့ တကယ်ကိုအများအပြားပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး အားလုံးရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက် ယုံကြည်ရာကို လျှောက်လှမ်းကာ အားတင်းကြိုးစားရင်း တိုက်ပွဲဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ […]
မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် ရွှေရူပါဦးအား ဝင်ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထား
မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် ရွှေရူပါဦးအား ဝင်ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထား စစ်အာဏာရှင်များအတွက် ယနေ့ဓာတ်စာသမီးလိမ္မာလေးရယ် ဘဘတို့နဲ့ တွဲရိုက်ပါကွယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် ရွှေရူပါဦးအား ဝင်ခွင့်မပြုရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ထား ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၌ အခြေစိုက်သော မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် သရုပ်ဆောင်နှင့် မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ရွှေရူပါဦးကို စစ်ဌာနချုပ်ရုံးအတွင်းသို့ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှ ဝင်ခွင့်မပြုရန် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်မြတ်သက်ဦးက ယနေ့နံနက် […]